टेलिकमले दियो ग्राहकहरु लाइ यी २२ अफर ! लिएर मज्जा लुट्नुस्, विद्यार्थीलाई पनि यस्तो अफर «
टेलिकमले दियो ग्राहकहरु लाइ यी २२ अफर ! लिएर मज्जा लुट्नुस्, विद्यार्थीलाई पनि यस्तो अफर
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ग्राहकहरुका लागि अटम अफर (Autumn Offer) उपलब्ध गराउने भएको छ । उक्त अफरहरु लागू भई सकेको छ र अफर आगामी पुस २८ गते सम्म लिन सकिने छ ।
विभिन्न प्याकेज प्राप्त गर्नका लागि ग्राहकले *1415# मा डायल गर्नु पर्ने छ । त्यसैगरी कम्पनीको वेबसाइटwww.ntc.net.np मार्फत पनि यस सम्बन्धी जनकारी लिन सकिन्छ । उल्लेख गरिएका सबै दरहरु करसहित भएको टेलिकमले जनाएको छ ।